Kubatsirwa kwaEndesa kwakangofanana neiko kwechisungo | Ehupfumi Zvemari
Endesa ndechimwe chekuchengetedza zvakanyanya mumisika yeSpain equity, uye kusvika padanho rekuti pane zviuru nezviuru huwandu hwezvikamu zvinoshandura maoko munzvimbo dzese dzekutengesa. Hazvishamise kuti imwe yehunhu hwayo hwakanyanya kukosha ndeyekupa kwayinoita kune vanoita mari. Mupfungwa iyi, inofanira kurangarirwa kuti ndeimwe yetsika iyo gadzira izvo zvinonzi zvitema machipisi pamwechete naIberdrola, BBVA, Banco Santander naRapsol. Ndokureva, iwo mashanu akakosha kukosha eiyo yakasarudzika indekisi yeSpanish stock market, iyo Ibex 35.
Sekuziva kwese munhu, Endesa ndeimwe yemakambani emagetsi akakosha mudunhu renyika uye pamwe chete ne Iberdrola inogovera chikamu chakakura chemabasa emagetsi emunyika . Kupa magetsi, gasi uye mamwe masevhisi emagetsi kune chikamu chakanaka chevashandisi veSpanish. Zvese izvi kunyangwe hazvo vanga vari mumaoko ekambani yemagetsi yeEtari kwemakore mazhinji. Kunyangwe ichiri chimwe chezviyero mumusika wenyika.
Asi kana paine chimwe chinhu chinotsanangudza mashandiro eEndesa mumisika yemari, imhaka yekuti ndeimwe yemabheti emusika wemasheya anopa kuchengetedzeka kukuru panguva ino kune vashoma nevapakati varimari. Kunyanya nekuti hachisi kukosha kwakanyanya kuitisa kuti kuve nekuchinja zvakanyanya zvechisimba mumisika yemari. Kana zvisina kudaro, pane zvinopesana, zvikamu zvaro zviri kutengesa nehumwe kugadzikana uye nemasimba akasimba kwazvo pakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma. Sezvazviri nemamwe maitiro ane hukasha emari dzeSpanish.
1 Endesa: kubatsirwa kwe7%
2 Nemutsara wakachengeteka webhizinesi
3 Mukutsvaga nguva dzese-dzakakwirira
4 Natsiridza yako mhedzisiro yebhizinesi
5 Tsigiro pa15 euros pamugove
6 Simba rekuisa kukosha
Endesa: kubatsirwa kwe7%
Asi kana Endesa ichizivikanwa nechimwe chinhu pakati pevashambadziri, imhaka yechikamu chakakwira icho chinopa kune avo vagovana navo. Gore rino, yakatarwa mihoro ndeye 7,30% uye inoitika kuva yepamusoro soro pasitoko yenyika yose. Kunyangwe kubva kumunda weakare kondinendi mabhegi. Zvakanyanya kukosha mukugovewa kwedividheni zvekuti vatyairi vazhinji vanosarudza kukosha uku chete nekuda kwemubhadharo wainopa uyu pfungwa. Hazvishamise kuti vamwe vaongorori vezvemari vanofananidza zviito zvavo neicho chaizvo chisungo.
Hazvishamise kuti goho rako rezvikamu harigone kuwanikwa mune zvimwe zvigadzirwa zvemari. Zvishoma zvishoma mumabhangi asingatombo kupa 1% panguva ino uye semhedzisiro yeiyo mutengo wakachipa wemari nenharaunda dzemari dzemunharaunda. Uye izvo zvakatungamira mukukosha kwayo kuri kuita zero panguva ino, kuve pa0%. Ichi chimwe chekukurudzira kunyorera masheya ekambani yemagetsi nekuti inogadzira yakadzoserwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega rega. Kuburikidza nemari mbiri dzinoitwa mumwedzi yaNdira naJuly.
Nemutsara wakachengeteka webhizinesi
Pane chinhu chimwe chine chokwadi muEndesa uye inosanganisirwa mune yakavimbika chikamu chebhizinesi senge magetsi. Kure kure nemhedzisiro yedambudziko rehupfumi sezvo ichipa sevhisi inogara ichidiwa nevashandisi, zvisinei nemamiriro avo ehupfumi. Zvakare, haugone kukanganwa kuti magetsi emagetsi ari pakati peakakwirira mukondinendi yese European. Kuburikidza nechikamu chinogara chakanyanya kuSpain uye pamusoro pezvimwe zvakakosha senge kubhengi. Izvi zvinokurudzira kusimudzirwa kwakanaka kwezvikamu zvaro mumisika yemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Chero zvazvingaitika, kana Endesa ichizivikanwa nechinhu chimwe, imhaka yekuti ndeyekudzivirira cutoff kukosha. Kusvika padanho rekuti iyo hunhu hwezviito zvako zviri nani kwazvo mumamiriro ezvinhu akawandisa emisika yemasheya. Kunyangwe nekuda kwechikonzero chimwe chete, zvikamu zvavo hazvisimuke zvakanyanya kana iko kuitika mune indices indices kuri pachena kusimba. Izvi zvechokwadi zvinotsanangura kuti nei isiri kambani kuburitsa purofiti munzvimbo pfupi kwazvo yenguva. Huye, ndizvo izvo zvimwe zvinokosheswa zvakanyanya mukuita kwavo mumisika yemari. Icho chinhu icho iwe chaunofanirwa kuziva zvakakwana kana iwe uchida kushanda neichi chakakosha uye panguva imwechete tsika yechinyakare.
Mukutsvaga nguva dzese-dzakakwirira
Panguva ino, zvikamu zveiyi yakakosha magetsi kambani iri kuyedza kusvika kune avo nguva dzese-dzakakwira dzakatenderedza makumi maviri nemaviri euros. Ane zvishoma zvishoma zvekuita uye ipapo aigona kupinda zvizere muchimiro chinozivikanwa sekusununguka kusimuka. Icho chimwe cheicho chinonyanya kubatsira pane zvaunofarira sezvo chaisazove nekupokana munzira. Nesarudzo yakajeka yekutenga kuyedza kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire pamwe nekubudirira kwakati. Kunze kwekuita purofiti iwe yaunogona kuwana kuburikidza nekubhadhara kwezvikamu.
Kune rimwe divi, zvakare inomira pachena nekuti iri imwe yemasheya anobatsira kwazvo gore rino, nekutenda kuri kusvika 7%. Kunyangwe mugore rapfuura rinenge 15% yemutengo waro wakasiiwa mumugero uye semhedzisiro yekusahadzika kuti mutsara waro webhizinesi wakagadzirwa mumisika yemari. Nekururamisa kwakadzama mumitengo yavo iyo yakapa kukwira kuvazhinji vashoma uye vepakati varimi vatora zvinzvimbo kuti vatore mukana wemitengo yakaderera iyo yavo migove yakatengeswa.
Natsiridza yako mhedzisiro yebhizinesi
Endesa yakwanisa kuwedzera iyo mambure purofiti ne47% kusvika 372 mamirioni euros mukati mekota yekutanga yegore, nekuda kwekukura kwebhizinesi rakasununguka, iro huwandu hwaro hwakawedzera zvakapetwa, maererano nekambani pachayo. Kune rimwe divi, mari inowanikwa nekambani yemagetsi munguva kubva muna Ndira kusvika Kurume yakasvika pamamiriyoni e5.169 emamiriyoni, zvinoreva kuderera zvishoma kwe1% kana zvichienzaniswa nekutora kwemamiriyoni mashanu nemakumi maviri nemaviri emamiriyoni akawanikwa munguva imwechete ye5.223.
Imwe yedhata yakakosheswa yakapihwa nekambani yemagetsi inotora kubva kuchokwadi chekuti yayo Gross inoshanda purofiti (Ebitda) yeboka racho yaive 880 mamirioni euros Pakupera kwaKurume wegore rino razvino, nekukura kwe25%, nepo purofiti yekushandisa (Ebit) mukota yekutanga yaive 508 mamirioni euros, uye iyo mukuita inomiririra 49% kupfuura gore rapfuura. Kusvika padanho rekuti mamaneja aro anotarisira mambure purofiti akatenderedza 1.400 mamirioni euros uye Ebitda yakatenderedza 3.400 mamirioni euros pakupera kwegore.
Tsigiro pa15 euros pamugove
Kune rimwe divi, ine rutsigiro rwakasimba pa15 euros pamugove, kunyangwe kana ikawa inogona kudonha yakatodzika uye kupinda mutserendende une ngozi zvakanyanya kune zvako zvaunofarira sewe investor. Izvi zvinoitika kana mamiriro ezvinhu akachinja zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti haugone kukanganwa kuti panguva ino maitiro ayo ari kumusoro mune ipfupi, yepakati uye yakareba. Chiitiko chakanakira iwe kutora chinzvimbo mumazuva anotevera. Chero zvazvingaitika, usatarisira kudzokororwa kukuru sevanoongorora zvemari vanongopa pakati pe5% ne8% sekugona kwekukura.
Kune rimwe divi, zvinonakidza zvakare kuti iwe unokoshesa chokwadi chekuti Endesa inogona kuchinja yayo yekugovana chero nguva. Ichi chinhu chakakosha kwazvo chinogona kukanganisa mutengo wezvikamu zvako kuti ukwire kana kudonha zvichienderana nechipo chavanotumira kumisika yemari. Zvakare sezvinobvira kugadzirisa nehurumende yeSpain mumagetsi emitengo. Uye mune izvo zviitiko, ingave iri mamiriro akakwana ekuti zvikamu zvaro zviwire zvakanyanya mumisika yemasheya. Chingave chimwe chezvipingaidzo kana iwe ukaisa mari yako mune ino yakakosha kambani yeSpanish equity.
Nesarudzo yakajeka yekutenga kuyedza kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire pamwe nekubudirira kwakati. Kunze kwekuita purofiti iwe yaunogona kuwana kuburikidza nekubhadhara kwezvikamu.
Simba rekuisa kukosha
Ehezve, pane zvinhu zvinoverengeka zvekuti iwe usarudze Endesa senge zano rekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Iwe unoda kuziva izvo zvakakosha zvakanyanya here?
Chikamu chakakwirira icho chinogadzira uye icho inishuwarenzi kusvika 2020, maererano nevatungamiriri vavo vepamusoro.
Icho chimwe che mareferensi kukosha kweSpanish equities uye chete izvi zvichafanira kufunga nezve mukana wekupinda munzvimbo dzavo kubva zvino zvichienda mberi.
Inosanganisirwa mu Strategic chikamu cheSpain sezvo iri yemagetsi uye izvi zvinoreva kuti kudonha kukuru hakutarisirwe mumakore anotevera. Zvirinani kwete pamatanho ari kunetseka zvakanyanya kune vanoita mari.
Inopa kukwirira kwemvura uye izvo zvinokutendera iwe pinda uye buda munzvimbo kubva kukambani yemagetsi iyi nekureruka kukuru. Uye pasina chero nguva kubatwa senge nedzimwe tsika.
Iko kune yakasimba kutenga mubereko kubva kuvashambadziri uye chii chinoita chinzvimbo kutora kuenda kugadzirisa nekuchinja kukuru uye kushanduka. Kunyangwe paine dzimwe ongororo izvo zvechokwadi hazvizove zvinoshamisira zvachose. Kana zvisina kudaro, ivo vanofamba vachienda mumamirina madiki pane mune imwe nhevedzano yemaitiro ane hukasha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kubatsira kwaEndesa kwakangofanana neiko kwechisungo
Chii chingaitika mukubhuroka kwekambani yakanyorwa?